မိုးတိမ်၏ ဘာညာသာရကာ နေကြာ ကွာစိ: May 2007
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:36 PM0comments
သောင်းကျန်းလာတဲ့ Virus တွေကို လတ်တလေ နှိမ်နှင်းဖို့ရာ အစွမ်းထက် FreeWare
ကျွန်တော် Flu နေတာနဲ့ ပိုစ့်တွေ မတင်ဖြစ်ဘူး ... ခုတစ်လော Virus တွေ တော်တော်လေးကို သောင်းကျန်းနေတယ်ဗျာ .. ရုံးက LAN Station မှာလည်း သတ်လိုက်ရတာ ၃ ရက်လောက်ကြာတယ်။ Memory Stick က ကူးတာဗျာ။ အစရုံးက Clients တွေမှာ Avg တင်ထားတာ... အင်တာနက် မချိတ်ထားလို့။ Server နဲ့ Special PC တွေမှာတော့ NOD32 တင်ထားတယ်ဗျာ။ အဲ့ဒီစက်တွေက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ Avg တင်ထားတဲ့စက်တွေက ပြဿနာတက်ရော .... နောက်ဆုံး စက်တစ်လုံးချင်စီကို လိုက်သတ်ရတော့တာပေါ့။ Avg နဲ့ လုံးဝကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တစ်ခြား Antivirus တင်ရင်လည်း မရနိုင်ဘူး။ Portable NOD32 နဲ့ Scan လုပ်လိုက်တော့ ပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ခြင်းဖျက်မပေးဘူး ... System Start လုပ်တဲ့အချိန်မှ ဖျက်ပေးမယ်ဆိုတော့ Boot လုပ်တဲ့အချိန်မှ သူက DOS ကနေ ဖျက်မယ့်သဘောရှိတယ်။
အဲ့ ... ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာက Portable NOD32 ဆိုတော့ဗျာ ..Boot လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ Portable Kaspersky နဲ့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ PC တွေကို Full Version တင်ရမယ်ဆိုတာ သေချာနေပြီ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို လိုက်တင်ပြီးရင် အဲ့ဒီစက်တွေမှာ Internet ချိတ်မထားဘူး။ NOD32, Kaspersky က Auto-Update လုပ်ကြတာ။ Manual လုပ်လို့မရဘူး။ အဲ့ဒါလည်း မဖြစ်ပြန်ဘူး။ ပြီးရင် အကုန်လုံးကို Manual လုပ်လို့ရတဲ့ဟာ ပြန်တင်ရမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် တကယ်မလွယ်ကျော်ပဲ။ ဟူး ... စဉ်းစားရင် ခေါင်းတောင်ကိုက်တယ်။ လူကလည်း သိပ်နေမကောင်း .... စက်တွေကလည်း ဒုက္ခပေး .... နောက်ဆုံးတော့ ဟိုရှာ ဒီဖတ်နဲ့ ဘာသွားတွေ့သလဲဆိုတော့ Alwll က ထုတ်တဲ့ Avast Anti-Virus ကိုသွားတွေ့တယ်ဗျာ။ သူက Home Edition ကို Free ပေးထားတယ်။ Sing-up လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဆီကို Activate/Serial Code ပို့ပေးတယ်။ ပြီးတော့ Manual Update လုပ်လို့ရတယ်။ တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ် Update ကိုတင်ပေးထားတယ်။ Exe ဖိုင်ပါ။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ ဆွဲချပြီး Double Click လုပ်ရုံပဲ။ အဲ ... Professional Version သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ပိုက်ပေးဝယ်ရမှာပေါ့။ နည်းလမ်းရှိတဲ့သူတွေကလည်း ဟီး .. ခရက်သုံးကြတာပေါ့ ... ဟုတ်ဘူးလား .. ။ ဒါနဲ့ပဲ စက်တစ်လုံးမှာ စမ်းပြီးတင်ကြည့်တယ်။ Install လုပ်ပြီးပြီးချင်း သူကမေးတယ် ... Boot Time Scan လုပ်မလားလို့ .... ကျွန်တော် က OK လို့ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ Latest Update ကိုကူးပြီး Install လုပ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ပီစီကို Restart လုပ်လိုက်တယ်။ PC Boot ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Avast ဟာ စပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဗျာ့ ... ရှိသမျှ Virus တွေကို အကုန်ရှင်းသွားတယ်။ Virus တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ သူက Command တောင်းတယ် ... ဖျက်မှာလား .. Ignore လုပ်မှာလား .. နေရာရွေ့မှာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ .. ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်လုံးကို Delete လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပြီးသွားတော့ စက်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာ ... ဘာ Virus/Worm မှ မရှိတော့ဘူးဗျာ ... တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗျာ။ ခု စက်တွေ အကုန်လုံးကို Avast ပဲတင်ထားတယ်။ သူက System Resource ကိုလည်း သိပ်မသုံးဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိတယ်။ မဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်။ ပြီးတော့ သူက ထူးထူးခြားခြား Control Interface ကို Media Player တွေလို Skin တွေသုံးလို့ရတယ်ဗျာ့ ..... အကုန်လုံးကို Free Download လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အင်တာနက် ချိတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့စက်တွေမှာ Anti-Virus သုံးမယ်ဆိုရင် Avast ကို ညွန်ပြချင်တယ်။ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ Professional Version သုံးလို့လည်းရတယ်လေ ;) ..... Vista အတွက်လည်း Ready ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတော်တော်များများ သတိမထားမိကြတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရတာ လေးလာပြီဆိုရင် Virus ကြောင့်ပဲထင်ကြတယ်။ Spyware/spybot တွေ ဒုက္ခပေးတတ်ကြတာကို သိပ်ပြီး သတိမထားမိကြဘူးဗျာ။ မယုံရင် အခု Spybot Search & Destroy ကို Install လုပ်ပြီး စစ်ကြည့်ပါလား ... မိတ်ဆွေရဲ့စက်မှာ ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင် ၂ ကောင်လောက် အနည်းဆုံးတွေ့ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် Spyware သတ်တဲ့ကောင်းကိုပါ တွဲပြီးသုံးဖို့လိုတာပေါ့။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ Recommended ပေးချင်တာကတော့ Spybot Search & Destroy ကိုပါ။အစွမ်းထက်တဲ့ Free Ware တစ်ခုပါ။ Update တွေလည်း တင်ပေးတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ကိုယ့်စက်မှာ Spy-Ware စစ်ပေးသင့်တယ်။ အဲ့ဒီကောင်တွေက ကိုယ့်စက်က Performances တွေကို ကျသွားစေတယ်။ ဒါကြောင့် ရှင်းလင်းသင့်တာပေါ့။ Avast ရယ် Spybot Search & Destroy ရယ် သင့်စက်ပေါ်မှာ ရှိနေပြီဆိုရင် အလုပ်ကို စိတ်ချလက်ချ လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ .... 100% တော့ ကျွန်တော် Recommended မပေးဘူးနော်။ သူတို့က Freeware တွေဆိုတော့ အားနည်းချက်တွေလည်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အိမ်သုံးကွန်ပျူတာတွေ အတွက်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ Internet ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်တော့ Kaspersky, NOD32 စတာတွေကို သုံးသင့်တယ် ...
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 11:57 AM0comments
Labels: Anti-Spyware, Anti-Virus, သိသင့်တာလေးတွေ, သိစေချင်တာလေးတွေ
WinRAR ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် လူတိုင်းသိကျမှာပါ။ စက်တိုင်းမှာလည်း ရှိမယ်ထင်တာပဲ။ မသိသေးရင်တော့ WinRAR ဆိုတာဟာ Powerfull File Compression ဆော့ဝဲလ်းလေးတစ်ခုပါ။ သူက Security setting ကလည်းကောင်းတဲ့အတွက် အသုံးများကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့သူတွေလဟာ .zip ကို သိပ်မသုံးကြတော့ပါဘူး .rar ကိုပဲသုံးကြတော့တယ်။ rar ရဲ့အားသာချက်က zip ထက်ပိုပြီး Compression Power ကောင်းတယ်။ Security ပိုကောင်းတယ်။ ကျွန်တာ် WinRAR ရဲ့ corporate Edition လေးရထားတယ်ဗျာ .. အဲ့ဒါလေး ရှယ်ချင်လို့ ... :D
Icon တွေပြောင်းသွားတော့ စသုံးသုံးချင်း နည်းနည်းအူကြောင်ကြောင်ဖြစ်တယ် ... ဟီး
Compress Ration တွေပိုမြင့်လာတယ်လို့ပြောတာပဲ .. ကျန်တာ ဘာတွေထူးခြားလာလဲဆိုရင် အောက်ကစာလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ . . .
- WinRAR offers the ability to create selfextracting and multivolume archives. Recovery record and recovery volumes allow to reconstruct even physically damaged archives.
လိုချင်တယ်ဆိုရင် >>>> ဒီမှာယူလိုက်ပါ <<<<
ကြီးမားတဲ့ ပန်းသီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိခဲ့တယ် ....
ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ဟာ .... အဲ့ဒီပန်းသီးပင်ကြီးနား ပျော်ရွှင်စွာ ကစားခဲ့တယ်။ သူဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးပေါ်ကို တက်ရတာနှစ်သက်သလို ပန်းသီးတွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ နားနေအပန်းဖြေတာကိုလည်း သဘောကျတယ်လေ ....... ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း ကောင်ကလေးကို ချစ်ခင်တယ် ....
ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်သွားလေရဲ့ ...
ကောင်လေးကလည်း အရွယ်ရောက် ကြီးပြင်းလာတာပေါ့ .... ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်ကျတော့ ကောင်လေးဟာ သစ်ပင်နားမှာ ဆော့ကစားခြင်း မပြုတော့ပါဘူး။ တစ်နေ့ကျတော့ ကောင်လေးက ပန်းသီးပင်ကြီးနား ရောက်လာပြန်ရော .... အဲ့ဒီအခါ ... ပန်းသီးပင်ကြီးက ...
“လူလေး ... မင်္ဂလာပါ .... ကျွန်ုပ်နားလာကစားပါဦး ...”
ဒီတော့ ကောင်လေးက ပြန်ပြောတယ် ...
“ကျွန်တော်အခု ကလေးငယ်လေးမဟုတ်တော့ပါဘူး .... ကျွန်တော် သစ်ပင်နားမှာ မကစားတော့ပါဘူး ..” တဲ့
ပြီးတော့ ... “ကျွန်တော်က အရုပ်တွေနဲ့ကစားချင်တယ် .... အရုပ်တွေဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုအပ်နေပါတယ်”
လို့လည်း ပြောတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ... ပန်းသီးပင်ကြီးက ..
“ကျွန်ုပ်မှာ ပိုက်ဆံတော့မရှိပါ ..... ဒါပေမယ် .... ကျွန်ုပ်ရဲ့အသီးတွေကို ခူးဆွတ်ပြီး လူလေးသွားရောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် လူလေးလိုအပ်နေတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ရလိမ့်မယ်”
ဒီတော့ ကောင်းကလေးဟာ .... ပန်းသီးပင်ကြီးမှာ ရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးကို ခူးဆွတ်ရောင်းချပြီး ... သူကစားဖို့ အရုပ်တွေ အများကြီးဝယ်လိုက်တယ် .... ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကိုတော့ သူပြန်မသွားတော့ပါဘူး။ သူ့အရုပ်တွေနဲ့ ပျော်မွေ့နေပါတော့တယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးက ကောင်ကလေးသူ့ဆီမလာတော့ ၀မ်းနည်းရပြန်ပြီပေါ့ . . . .
တစ်ရက်ကျတော့ လူတစ်ယောက်ဟာ ညိုးငယ်စွာနဲ့ ... ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ရောက်လာပြန်ရော.... တစ်ခြားလူမဟုတ်ပါဘူး .... ဟိုငယ်ငယ်တုန်းက ပန်းသီးပင်ကြီးနား ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ ကောင်ကလေးပါပဲ ... အခုဆို အရွယ်ရောက်နေပါပြီ ........ ပန်းသီးပင်ကြီးက သူ့ကိုမြင်တော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ....
“လူလေး ... ဘာတွေဖြစ်လို့ မျက်နှာမကောင်းပဲ ညှိုးငယ်နေရတာလဲ .... ကျွန်ုပ်ရဲ့အရိပ်မှာ လာပြီးအနားယူ အပန်းဖြေပါဦး ... လူလေးမရှိရင် ကျွန်ုပ်ပျင်းလွန်းလို့ပါ”လို့
့ ... ခရီးဦးကြို နှုတ်ခွန်းဆက်တယ် ... ဒီတော့ အဲ့ဒီလူက ..
“ကျွန်တော့်မှာ ဆော့ကစားဖို့အချိန်မရှိပါဘူးခင်ဗျား ..... ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက် အလုပ်လုပ်နေပါတယ် ... ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက် အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပေးချင်ပါတယ် ... အဲ့ဒီအတွက်ငွေလိုအပ်တယ် ... ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်”လို့
ပြန်ပြောတယ် ... ဒီစကားကြားတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးက ...
“ကျွန်ုပ်မှာ ငွေတော့မရှိဘူး ... လူလေး . . . ဒါပေမယ့် ... ကျွန်ုပ်ရဲ့သစ်ကိုင်း၊ သစ်ခက်၊ ပင်စည်တွေကို လူလေး မိသားစုအတွက် အိမ်ဆောက်ဖို့ ယူသွားနိုင်ပါတယ်” လို့ပြန်ပြောလေတယ်။
ဒီစကားကြားတော့ ကောင်လေးက ပျော်သွားတာပေါ့ ... ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ... ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ ပင်စည်၊ သစ်ကိုင်း၊ သစ်ခက်တွေကို ခုတ်ယူပြီး သူ့မိသားစုအတွက် အိမ်ဆောက်ပေးလိုက်ပါရော...
ဒီလိုနဲ့ ပန်းသီးပင်ကြီးဟာ ... သစ်ငုတ်တိုအဖြစ်နဲ့ အထီးကျန်နေပြန်ရော ... ကောင်းလေးကတော့ ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး ... ဒီလိုနဲ့အချိန်ကာလတွေ ကုန်လွန်ပြီးတော့တစ်နေ့ အဘိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ရောက်လာပြန်တယ် .... တစ်ခြားမဟုတ်ပါဘူး ... ကောင်းလေးပါပဲ .. အခုဆိုရင်သူဟာ အသက်ကြီးပြီး အိုးမင်းသွားပါပြီ .... သူ့ကိုကြည့်ရတာ ပင်ပန်းပြီ ... အထီးကျန်နေသလိုပါပဲ .... မျက်နှာပေါ်မှာ ၀မ်းနည်းတဲ့အရိပ်အကဲတွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ ... ပန်းသီးပင်ကြီးက သူ့ကိုတွေ့တော့ မေးပြန်တယ် ...“လူလေး .... ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနည်းနေတာလဲ ... ကျွန်ုပ်ကူညီပေးရမလား .... ဒါပေမယ့် ... ကျွန်ုမှာ အသီးလည်းမရှိ၊ အကိုင်း၊ အခက်၊ ပင်စည်တွေလည်းမရှိတော့လို့ လူလေးကို ကူညီနိုင်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ အဘိုးအိုက ...
“ကျွန်တော်အခု အလွန်ပဲ ပင်ပန်းနေပါပြီ။ ပြီးတော့ အထီးကျန်နေပါတယ်”လို့ ပြန်ပြောတယ်။ “ကျွန်တော် တစ်ခြားဘာမှ မလိုအပ်တော့ပါဘူး ... ကျွန်တော်လိုအပ်တာ ပန်းသီးပင်ကြီးကိုပါ ... ကျွန်တော် ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ အမြစ်ငုတ်တိုမှာ ထိုင်လို့ရမလားခင်ဗျား ...”လို့မေးလိုက်တယ်။ သစ်ပင်ကြီးက ..“သိပ်ရတာပေါ့ကွာ ... မင်းကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေတယ်”လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
ကောင်လေး(အဘိုးအို)ဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ သစ်မြစ်မှာ ထိုင်ပြီး အနားယူလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးလုံးဟာ ပျော်ရွှင်လို့ပေါ့ ....
ကောင်းကလေးဟာ .... ရက်စက်ပြီး ... တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါသလား ... ???????
ဟုတ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ရင် .... ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ သူနဲ့အတူတူပါပဲ ...... ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကို ပန်းသီးပင်ကြီးလို ဆက်ဆံနေကြပါတယ် ..... ပန်းသီးပင်ကြီးဟာ ကျွန်တော်တို့မိဘနဲ့တူပါတယ် ... ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ... ကောင်ကလေးအသွင်နဲ့ပေါ့ ...
ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ခါမှာ သူတို့နားမှာ သူတို့နဲ့ဆော့ကစားပါတယ် . . .
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ... အရွယ်ရောက်လာတော့ သူတို့တွေကို ထားခဲ့ပြီး အခက်အခဲ၊ ပြသာနာဖြစ်တဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ... အကူအညီလိုတဲ့အချိန်ကျမှ ပြန်လာတတ်ကြတယ် .... ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ... မိဘတွေကို အချိန်မပေးခဲ့ဘူး ... အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး .... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘကတော့ ..... ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် ပေးဆပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ ...ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ဖို့၊ စိတ်ချမ်းသာနိုင်ဖို့အတွက် ... လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အရာရာတိုင်းကို အကူအညီပေးဖို့အတွက် အဆင်သင့်ပါပဲ .... ပြီးတော့ သူတို့ဘာတွေ လိုအပ်သလဲလို့ ကြည့်လိုက်ရင် သားသမီးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွနေထိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒလေးပါပဲ ...
ကျေးဇူပြုပြီး သင့်မိဘကို ချစ်ပါ .... ဂရုစိုက်ပါ ..
သူတို့ကို အချိန်ပေးပါ ...
သူတို့ကို မမေ့ပါနဲ့ ...
ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့နဲ့အတူတကွ နွေးထွေးစွာနေထိုင်ပါ ...
သူတို့ဟာ သင်ပျော်ရွှင်၊ စိတ်ချမ်းသာနေတာကိုမြင်ရရင် ပျော်ရွှင်နေပါ့မယ် ...
သူတို့ကို အထီးကျန်နေအောင် .. မထားခဲ့ပါနဲ့
သူတို့ကိုလေးစားပါ ..... ချစ်ခင်ပါ ...... ရိုသေပါ ...
လူတစ်ယောက်ဟာ ကလေးကို ကိုယ်လိုချင်သလောက် ရနိုင်ပေမယ့် ..... မိဘကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ရနိုင်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် ... သင့်မိဘကို ဂရုစိုက်ပါ ...
စာဖတ်သူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ........
ကမ္ဘာပေါ်ရှိသော မိဘအားလုံးသို့ ရည်စူး၍ ......
ကျွန်တော့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကို ဤပိုစ့်ဖြင့် လှမ်းကန်တော့လိုက်ပါတယ် ......
အခြေအနေအရ .... မိဘနဲ့ခွဲခွာနေရပေမယ့် ... ရင်ထဲမှာတော့အမြဲ ရိုသေလေးစားနေပါတယ် ..... အမေနဲ့အဖေ .......
(ဘယ်သူရေးထားမှန်းမသိဘူး ... ကျွန်တော်ဆီ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးလ်ပို့လိုက်တာ .... အဲဒါကို အရမ်းကြိုက်လို့ ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်တာပါ ..... )
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:39 AM0comments
Labels: ၀မ်းနည်းစရာလေးတွေ, ရင်ထဲကစကားလေးတွေ, သိစေချင်တာလေးတွေ
ဘာတွေလဲ ......ဘာဆိုဘာမှ မမြင်ရဘူး ..... ဘာဆိုဘာမှကို မတွေ့ပါလား ......
ဘယ်လိုလို့မြင်ရမှာလဲ ..... ဘာမှမှ မရှိတာ .....အစကတည်းကကို ဘာမှမရှိတာ ....
ဘာမှ မရှိတာကို ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှမရှိအောင်ထားတာလဲ ....
ဘာမှမရှိတော့ ကြည့်ရတာ .. ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ .. ဘာမှမဖြစ်တော့ ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ ...
ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ .... ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပေါ့ .... သူ့အတိုင်း ဘာမှမရှိတာကို စိတ်ချမ်းသာလို့ပါ ......
ဘာတွေဖြစ်လို့ ..... ဘာတွေရေးနေမှန်းမသိဘူး .... ဘာမှလည်းရှင်ပြလို့မရဘူး ..... ဒါပါပဲ ...
အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ ဘာတွေတင်ရမှန်းမသိလို့ ဘာမှမရှိတာရေးပြီး ဘာမှမရှိသေးတဲ့နေရာမှာတင်လိုက်တယ် ..
ဘာမှမမြင်ရရင် ခွင့်လွတ်ကြပါ ...
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 3:58 PM0comments
ဒီကနေ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ ကိုယ့်နာမည်ကို Google လုပ်လိုက်တာ .... ထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဗျာ ... ကျွန်တော့် ဘလော့ နာမည်နဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်။ တော်တော်လေးကို အံ့သြသွားတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်တာနဲ့ ကလစ်လုပ်ပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်တယ်
... လားလား .... AD site ကြီးပါလား "Mega Site" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ဗျာ ..... Address ကိုသေသေချာချာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ .. ဟိုက်ရှားပါး ... လက်လန်တယ် .... http://www.shwemoetain.blogspot.com မှာ blogspot ကို blogpsot လုပ်ထားတယ်ဗျာ။ ရှေ့ကဘလော့နာမည်ကတော့ အတူတူပဲ။ လူတွေ စာရိုက်မှားတတ်ကြတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ထင်ယောင် ထင်မှားလုပ်ထားတာပဲ။ စိတ်ရှုပ်စရာကြီးပါလား။ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ သိချင်တာနဲ့ ရှာကြည့်လိုက်တော့ http://www.bibledesk.com က လုပ်တားတာဗျာ။ ကျွန်တော့် အထင် ကျွန်တော်တို့တတွေ အသုံးပြုနေတဲ့ Free Wedget တစ်ခုခုက လုပ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် .. ကျွန်တော်တို့ ဘလော့လိပ်စာတွေကို ရောင်းစားတာဖြစ်မယ်ဗျ။ ကျွန်တော်မသင်ကာတာနဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် ဘလော့တွေကို စမ်းကြည့်တော့ အကုန်လုံးရှိတယ်ဗျာ။ အရပ်ကတို့ရေ .... လုပ်ကြပါဦး
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 1:27 PM
Labels: စိတ်ရှုပ်စရာ, သိစေချင်တာလေးတွေ
ဟိုက်ရှားပါး .... ဒီနေ့ လိုင်းကားစီးရင်းနဲ့ ကားစပယ်ယာရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကျွန်တော် ရီချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းခဲ့ရတယ် ..... တော်တော် ကပ်သီးကပ်သပ်ဗျာ ...... စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ ပြောပုံက ... “ဟိုအမကြီး အထဲကို တိုးပါဗျာ ... အထဲမျာ အကျယ်ကြီး ... အကို .. အကိုလိုက်တိုးသွားလိုက် ... တိုးပါ .. အကိုကလည်း အ၀ကြီးပိတ်နေပြီ ... ဟို ဦးထုပ်အနီနဲ့ညီလေး .... မင်းဟိုဘက်လှည့်ကပ်လိုက်ပါလား ..... လမ်းပေါက်ကြီးပိတ်နေလို့ ...... ဟိုဦးလေးကြီး .... လက်တန်း နှစ်ဖက်လုံး ကိုင်မထားနဲ့လေဗျာ ..... လူဝင်လို့မရတော့ဘူး .... ဟား .... ပြောရတယ်ဗျာ ... မိုးလင်းကနေမိုးချုပ် ... ပြောပြန်ရင် စပယ်ယာအပေါက်ဆိုးတယ်လေး ပါလေးနဲ့ သူတို့တွေကျတော့ အချိုးပြေအောင် မနေကျဘူး ... တိုးကျဗျာ ... တိုးကျ .... နေရာလွတ်တွေ မထားကျနဲ့ ... ကျွန်တော်က စေတနာနဲ့ပါဗျာ ....... နေရာလွတ်နေရင် ကြက်ဆူပင်တွေ လာစိုက်သွားမှာစိုးလို့ပါ .... ဘယ်နေရာမှ နေရာလွတ်မထားနဲ့ .... အိမ်မှာလည်းမထားနဲ့ .. ကျွန်တော့်ကားပေါ်မှာလည်း မထားနဲ့” တဲ့ဗျာ ....... ဟားဟား .... စပယ်ယာကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြီ .. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ် ... ဘလော့ သူငယ်ချင်း ညီအကိုတို့ရေ ... ဘလော့ပေါ်မှာ နေရာလွတ်မထားကြနဲ့နော် ..... တော်ကြာ .. ကြက်ဆူပင်လာစိုက်သွားဦးမယ် ....
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 10:40 AM
ရေးသားသူ - မိုးတိမ် at 4:14 PM0comments